Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jaban ee Japan » Folkaanaha Japan ayaa qarxaya isagoo dambasyo mayl cirka cirka u galay
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Jaban ee Japan • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Folkaanaha Japan ayaa qarxaya isagoo dambasyo mayl cirka cirka ugu jira.
Japan waxay hoy u tahay in ka badan 100 Folkaano, dhaqdhaqaaqa dhulgariirka ee gobolkuna waa mid sarreeya. Khamiistii la soo dhaafay, aag ka fogaansho nus-mayl ah ayaa laga sameeyay agagaarka Buurta Aso ka dib markii uu qarxay wax yar.
Buurta Aso - volcano ugu firfircoon Japan - ayaa qarxay abaare 11:48 subaxnimo Arbacadii.
Saraakiisha Japan ayaa dadka uga digaya inay ka fogaadaan halista qulqulka lafaha iyo dhagxaanta soo dhacaya.
Wakiilka JMA ayaa ka digay intii lagu jiray shir jaraa'id oo telefishanka laga sii daayay in gaaska sunta ah laga yaabo inuu sidoo kale ka soo baxo volcano.
Saraakiisha Japan ayaa dadka uga digaya inay ka fogaadaan buurta Aso, oo ku taal jasiiradda koonfureed ee Kyushu, iyadoo fulkaanaha ugu firfircoon Japan uu qarxayo, isaga oo soo daadinaya gaas kulul iyo dambas dhawr mayl u jira cirka.
Booliiska deegaanka ayaa sheegay in ilaa hadda aysan jirin warbixino ku saabsan khasaaraha ama shaqsiyaadka la la’yahay. Waxay sheegeen in 16 qof oo lugaynaya oo hore u joogay buuraha maalintaas si nabad ah ay ku soo noqdeen.
Sida laga soo xigtay Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Japan, Mount Aso, oo ah goob loo dalxiis tago oo ku taal jasiiradda ugu weyn koonfurta dalka ee Kyushu, ayaa soo daadisay dambas 3.5km (2.2 mayl) sare Arbacadii markii uu qarxay abaare 11:43 am (02:43 GMT).
Wakaaladda saadaasha hawada ayaa u dejisay heerka feejignaanta kuwa ku dhow 1,592-mitir (5,222ft) ee fulkaanaha ilaa saddex ka mid ah shantii cabbirkooda halista ah. Iyada oo ay ugu wacan tahay halista dhagaxa waaweyn ee dhacaya iyo qulqulka pyroclastic oo u socda 1km (0.6 mayl) oo ka mid ah godka weyn ee Nakadake, ayaa dadka loo sheegay inaysan u soo dhowaan aagga.
“Nolosha Aadanaha ayaa ahmiyadda noo leh, waxaanan la shaqeyneynaa Ciidamada Is -difaaca, booliiska, iyo dab -damiska si aan si wax ku ool ah ula tacaalo xaaladda,” ayuu yiri Xoghayaha Golaha Xukuumadda Hirokazu Matsuno.
Magaalada ugu dhow ee Mt Aso ayaa ah Aso, oo ay ku nool yihiin ilaa 26,500 oo qof.
Buurta Aso ayaa qarxday yar sanadkii 2019, halka masiibadii volcano ee ugu xumeyd Japan ku dhawaad ​​90 sano ay ku dishay 63 qof Buurta Ontake bishii Sebtember 2014.
Japan waxay hoy u tahay in ka badan 100 foolkaanno, dhaqdhaqaaqa seismic -na gobolka waa mid sarreeya. Khamiistii la soo dhaafay, aag ka fogaansho nus-mayl ah ayaa laga sameeyay agagaarka Buurta Aso ka dib markii uu qarxay wax yar.
Dhinacyada qarxa folkaanaha, dhulgariirka ayaa sidoo kale ku badan Japan, mid ka mid ah meelaha ugu dhul -gariirka badan Dhulka. Japan ayaa leh qiyaastii boqolkiiba 20 dhulgariirrada dunida oo cabirkoodu yahay 6 ama ka weyn.